Qoraalkii Beesha Caalamka ee Qoloba dhinac ula carartay | KEYDMEDIA ONLINE
Qoraalkii Beesha Caalamka ee Qoloba dhinac ula carartay
Waxaa loo dheg-taagayay warbixinta Beesha Caalamku kasoo saari doonto toddobaadkan arrimaha la xiriira doorashooyinka Soomaaliya ee 2021, laakiin War-Saxaafadeedkii xalay ayaa su'aallo badan laga qabaa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xafiiska wakiilka ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa daabacay shalay galintii dambe Warbixin dheer oo ay si wada jir ah usoo saareen Beesha Caalamka.
Warbixinta oo ku qorneed Af-Soomaali iyo Ingiriisi waxaa lagu daabacay bogga rasmiga ah ee xafiiska UNSOM, sidoo kalena waxaa lagu sii baahiyay baraha ay bulshadu ku xiriirto, iyadoo qolo kasta oo kamida dhinacyada isku haya siyaasadda dalka ay qeyb kamida qoraalka dhinac u jiiteen.
Waxay sheegeen inaan waxba laga bedeli doonin, islamarkaana gorgortan laga galaynin heshiiskii doorashadda 17-kii September 2020 lagu gaarey Villa Somalia, kaasoo ay wada saxiixeen Farmaajo iyo Madaxda Maamulladda.
Waxaa iska caddaatay in dalka laga maamulo Xerada Xalane oo ay ku sugan yiiin Ajaanibta ugu badan ee Soomaaliya, qoraalka kasoo yeeray Beesha Caalamka kooxna si jilicsan loolama hadlin, waxaad mooddaa taliye ciidan oo la hadlaya askartiisa, waxaa loo sheegay labada dhinacba in dooq kale oo doorasho aysan lahayn, waxaana lagu amray in u hoggaansamaan amarka beesha caalamka ee ah Doorasho Dadban.
Kooxda talada haysa ee doorasho boobka ku mashquulsan ee Farmaajo hoggaamiyo waxay la dhaceen qoraalka qeyb kamida taasoo aan la dhihi karin 100% waxaa lagu garab istaagay nidaamka uu damacsan yahay Faramaajo ee ah in uu qabto doorashada gar iyo garrana uu ku saxan yahay! Waxaa lagu soo celcelyay in loo baahan yahay in marka hore heshiis laga gaaro arrimaha doorashooyinka, iyadoo aan la heshiina in aan doorasho la qaban karin wey ku caddahay waraaqda macnaha badan laga fahmay ee dadkuna ku wareereen.
Xerada Xalane ayaa laga maamulaa Soomaaliya, inta halkaas looga talinayo guul lama gaari doono, waxaa aragtideeda ka dhiibatay Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Qaranka Xaliimo Ismaaciil Xaliimo Yareey, waxayna carrabka ku dhufatay inta Xerada Xalano laga maamulayo Soomaaliya aysan heerna gaari karin meelna aysan u dhaqaaqi karin, sababtoo ah danaha Xerada Xalane looga arrinsanayo maahan dano Soomaali ee waa dano Ajaanib shisheeye oo dalka quwad ku leh.
Si kasta oo ay ahaataba arrimaha muranka dhaliyay ee la xiriira doorashooyinka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay in lagu xaliiyo tanaasul, cid gaara kuma aysan qasbin beesha caalamku in ay tanaasusho, balse waxay ku adkeeyeen dhinacyada isku haya in loo baahan yahay in loo turo umadda Soomaaliyeed oo loo dhimriyo, waxay gadaal ka raaciyeen warbixintooda in ay muhiim tahay in la ilaaliyo qoondada haweenka ee 30% taasoo ah rabitaanka beesha caalamka in la awood siiyo dumarka Soomaaliyeed oo ay sheegeen in mar kasta la dudsiyo xaqooda, laguna tunto!
Qoraalka Beesha Caalama wuxuu ku qasbayaa Madaxweyne Farmaajo inuusan rabitaankiisa kaliya cabirin, ee ay tahay inuu xeeriyo nidaamka umadda Soomaaliyeed u dagsan kaasoo ah in wada ogol wax lagu meel mariyo, waana habka kaliya ee looga gudbi karo doorasho muran iyo gacan ka hadal dhlisa!
Wariyeyaal Dhuusamareeb ku xirnaa oo la sii daayay
Warar 21 January 2021 22:49
Waxaa caawa dib xoriyaddooda u helay Labo Wariye oo dhawaan uu maamulka Galmudug ku xiray Xabsiga magaaladda Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Golaha wasiirada oo ansixiyay guddi cusub
Warar 21 January 2021 21:04
Farmaajo oo wali ka aamusan codsigii Guddi ka tirsan Baarlaamaanka
Warar 21 January 2021 19:33
Taliyeyaal Ciidan iyo Askar loo xiray dilkii Dhagajuun
Warar 21 January 2021 16:54